Akụkọ - Ngwunye ngwugwu "Mgbasawanye" na-eweta nchebe dị elu nke igbochi ọkụ
Ihe ngwugwu oku "Mgbasawanye" na-eweta nchebe dị elu nke igbochi ọkụ
N'ime afọ ndị na-adịbeghị anya, steeti etinyekwuola uche na mgbochi ọkụ nke ọrụ owuwu ihe, na etinyere ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ihe mgbochi ọkụ na owuwu injinia. Akpa nchekwa Db-a3-cd01 bụ ụdị ọkụ ọhụrụ na-akwado nkwado refractory nke ụlọ ọrụ Weicheng mepụtara dịka ọkọlọtọ mba ọhụrụ nke gb23864-2009 (ihe nkwụnye ọkụ). Thedị akpa db-a3-cd01 ọkụ na-ekpuchi ọkụ dị ka obere ohiri isi, a na-eji akwa iko na-eme ka akwa oyi akwa dị na mpụga, a juputara na ngwakọta nke ihe ndị na-enweghị ike ire ọkụ na ihe mgbakwunye pụrụ iche. Ngwaahịa ahụ bụ nke na-adịghị egbu egbu, nke na-enweghị ntụpọ, nke na-enweghị corrosion, na-eguzogide mmiri, na-eguzogide mmanụ, Hygrothermal na-eguzogide ọgwụ, oyi-gbazee okirikiri na njirimara mgbasawanye dị mma. Enwere ike igbasasị ya ma jiri ya mee ihe ọ bụla. Enwere ike ịme ya n'ụdị dị iche iche nke firewall na akwa mkpuchi ọkụ dịka ihe dị iche iche nke ndị ọrụ chọrọ, yana enwere ike iji ya pịnye oghere chọrọ ọgwụgwọ ọkụ ọkụ. Mgbe ị na-ezute ọkụ, ihe ndị dị na ngwugwu ọkụ na-ekpo ọkụ ma gbasaa iji mepụta ụgbụgbọ mmanụ a honeyụ, na-akpụ akwa mkpuchi siri ike iji nweta mgbochi ọkụ na mkpuchi ọkụ, ma na-achịkwa ọkụ n'ụzọ dị irè n'ime mpaghara. Mgbe nkedo nkwụnye rutere 240mm, njedebe nkwụsị ọkụ nwere ike iru karịa 180min.
Post oge: Jul-13-2020